Aqriso magacyada: Rooble oo magacaabay guddi cusub oo qaabilsan qeyb kamid ah heshiiskii doorashada – WARSOOR
MUQDISHO – (WARSOOR) – Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa goordhoweyd maagcaabay guddi cusub oo ugu magac daray “Guddiga Xaqiijinta Qoondada Haweenka”.
Guddiga cusub oo ka kooban 13 xubnood ayaa waxay ka shaqeyn doonaan u ololeynta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ugu yaraan 30% ee labada aqal ee BFS, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska Ra’iisal wasaaraha.
“Si loo hubiyo matalaadda haweenka ee goleyaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble waxa uu magacaabay guddi ka kooban 13 xubnood oo qaabilsan u ololeynta iyo xaqiijinta qoondada haweenka ugu yaraan 30% ee labada aqal ee BFS,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Guddiga cusub ee uu maanta magacaabay Rooble ayaa waxaa guddoomiye u ah Marwo Batuulo Axmed Gabale, waxaana qeyb ka ah haween caan ku ah u doodida xuquuqda haweenka.
Magacaabista guddigaan ayaa waxay kusoo aadeysa xili ay dib u dhacday doorashada Aqalka Sarre oo qorshuhu ahaa inay bilaabato maanta, balse aan ilaa hadda u hirgelin arrimo la xiriira dhameystiri la’aanta hanaanka doorashadaas.
Ra’iisal wasaare Rooble ayaa hore u ballan-qaaday ilaalinta qoondada haweenka ee labada aqal, midaasi oo qeyb ka aheyd heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Hoos ka aqriso magacyada xubnaha guddiga cusub: